HALATRA MOTO TENY SOAVIMASOANDRO : Tamin’ny alalan’ny « Gps » no nahatrarana ireo jiolahy
Mirongatra izay tsy izy ny halatra “môtô” eto an-drenivohitra. Mitombo isa hatrany ireo olona lasibatra mpampiasa ity fitaovam-pitaterana ity. 22 mai 2019
Raha ny angom-baovao voaray teo aloha teo dia efa nisy tambajotra mpangalatra môtô tratra ka nadoboka am-ponja. Misy kosa ireo mbola manohy ny asa ratsiny. Eo anatrehan’izay tranga izay indrindra dia mailo amin’ny asan-jiolahy ny mponina manodidina an’Antananarivo ka misy ireo mametraka “gps” amin’ny môtô fampiasany, izay fitaovana raitra manaraka ny toetrandro, ahafahana manara-maso izany. Toy ny zava-niseho, omaly maraina, tokony ho tamin’ny valo ora tany ho any dia tra-tehaka tamin’ny tsy nampoiziny ireo jiolahy raha toa ka saika hangalatra “scooter Jog“, izay nasian’ny tompony “gps”.
Avy hatrany dia narahina ny lalan’ity môtô ity ka fotoana fohy ihany dia hita izany. Tamin’ny fanadihadiana sy fizahana natao dia tsikaritra fa efa nisy niala sy nisolo ny kojakoja isan-karazany tamin’ilay môtô. Manaporofo tokoa izany fa efa arifomba sy kinga ireo mpangalatra môtô eto an-drenivohitra. Tsy mitazam-potsiny ny eo anivon’ny mpitandro filaminana fa manohy ny fikarohana ireo jiolahy. Efa misy ireo voasambotra saingy mbola eo am-panohizana ny fanadihadiana ny tompon’andraikitra.